चर्चित अभिनेत्री पोर्न भिडियोको सुटिङ गर्दै गर्दा रंगेहात पक्राउ परेको घटनामा कति सत्यता ? - Mitho Khabar
May 6, 2022 mithokhabarLeaveaComment on चर्चित अभिनेत्री पोर्न भिडियोको सुटिङ गर्दै गर्दा रंगेहात पक्राउ परेको घटनामा कति सत्यता ?
काठमाडौं । पोर्न भिडियोको सुटिङ गर्ने क्रममा एक चर्चित अभिनेत्री रंगेहात पक्राउ परेकी छिन् । आफ्नो रोचक फेसनका कारण चर्चामा रहने इन्टरनेट सेन्सेसन उर्फी जावेदको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । यो भिडियो हेरेर उर्फी जावेदका फ्यानहरु पनि छक्क परेका छन् ।
यस भिडियोमा प्रहरीले पोर्न फिल्मको सुटिङका ​​क्रममा ​​जावेदलाई रंगेहात समातेको हो । आज हामी त्यो भिडियोको पूरा सत्यता के हो भनेर जानकारी गराउन गइरहेका छौँ । यो भिडियो कन्टेन्ट क्रिएटर रोहित गुप्ताले फेब्रुअरीमा सेयर गरेका थिए । उर्फी अफिस पुगेर निर्देशकलाई भेटेको भिडियोमा देखाइएको छ ।
निर्देशकले उनलाई आफ्नो फिल्ममा राख्न चाहन्छन् । उनले उर्फीलाई आफ्नो प्रोजेक्ट (काम) गोप्य रहेको र रणवीर कपुरले चलचित्रमा खलनायकको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँछन् । यो सुनेर उर्फी जावेद उत्साहित हुन्छिन् । फिल्मको अभिनेताका लागि विदेशी कलाकारलाई लिइएको छ ।
चलचित्रमा बादशाहले संगीत दिने कुरा पनि बताइन्छ । फिल्मको नाम टाइटानिक हो । त्यसपछि रोहित गुप्ता दोस्रो निर्देशकको रूपमा अफिसमा आउँछन्, जो मुख्य अभिनेतासँग प्रवेश गर्छन् । उर्फीले मुख्य कलाकारको बारेमा सोध्दा उनी युगान्डाबाट आएको बताइएको छ ।
कोरोना सं,क्र,मण प्रभाव : सुनसान ब,न्दै राजधानी (भिडियो)